(၂၀၁၉) ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် (၁) နှစ်စာ ဟောစာတမ်း - CeleLove
(၂၀၁၉) ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် (၁) နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
June 12, 2019 Cele Love ဗေဒင်ကဏ္ဍ 0
ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်လတ္တံ့ …. ။
အတိတ်ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ရခြင်း၊ထီဆုကြီးပေါက်ခြင်း၊ခြံ၊ကား၊ကျောက် ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွင်ရှိလတ္တံ့။ အချစ်ရေးမေတ္တာရေးကံကောင်းခြင်း၊မျက်နှာပွင့် စန်းပွင့်ခြင်း၊ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းများ စုဆောင်းတိုးပွားခြင်းတို့ကြုံရလတ္တံ့။ စိတ်ကူးဥာဏ်ပေါ်သလောက် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ။အချိန်မဖြုန်းသင့်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိသမျှ ရဲရဲလုပ်ပါ။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အတိုက်အခံ အခက်အခဲ စိတ်ပူစရာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာများကြုံတွေ့ပြီးမှ အောင်မြင်လတ္တံ့။ မိမိမသိခဲ့သော အတိတ်ကံ အကောင်းအဆိုး နှစ်မျိုးစလုံး၏ အကျိုးကို တွေ့ကြုံခံစားရလတ္တံ့ …. ။
ငွေရေးကြေးရေး – အတိတ်ကံကို အကြောင်းပြု၍ ငွေကြေးအစုလိုက်အပုံလိုက်ရအံ့။ ငွေကြေးကံ အထူးကောင်းနေအံ့။ ငွေကြေးကိစ္စများ မိမိရည်မှန်းထားတာထက် ပိုမိုအောင်မြင်အံ့။ မိမိရည်မှန်းထားတာထက် ပိုမိုစုဆောင်းရအံ့။ တိုးပွားအံ့။ မလိုအပ်သည့်နေရာများတွင် ငွေကြေးဖြုန်းတီးမိတတ်တာကိုတော့ သိထားသင့်။ ငွေကြေးကိစ္စများ ရဲရဲတင်းတင်း ဆောင်ရွက်သင့်သည် …. ။
ထီထိုးကံစမ်းရန် – ကြက်သားကြော်ဘုရားလှူပါ ၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကို ဒါနလုပ်ပါ ။ ပြီးလျှင် ( သ ဟ က ခ ဂ ဃ င ) ပါသောထီဆိုင်တွင် (၂) နှင့် (၆) များများပါသော ထီလက်မှတ်ကိုရွေးထိုးပါ။ ပါးစပ်မှနေ တာဗားနိုး ( TAVANO) ရွတ်ပြီးထိုးပါ …။
အချစ်ရေး – အပျိုလူပျိုများ အတိတ်ဘ၀က ဆုတောင်းရှိခဲ့ဖူးသော အချစ်ဟောင်း အဆက်ဟောင်းများနှင့် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရလတ္တံ့။ ချစ်သူထံမှ အမှတ်တရလက်ဆောင်တစ်ခု ကြီးကြီးမားမားရအံ့။ မိမိကိုစိတ်ဝင်စား ချစ်ကြိုက်နေသူများ အများအပြားပေါ်လာလတ္တံ့။ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေအံ့။ အလွန်အမင်း စိတ်လှုပ်ရှား ရင်ခုန်နေရအံ့။ စိတ်ကောက်လိုက် ပြန်တည့်လိုက်ဖြင့် ကြည်နူးစရာများ အတိပြီးနေအံ့ …. ။
အိမ်ထောင်ရေး – မိမိအိမ်ထောင်ဖက်၏ သ၀န်တိုခြင်းကို ခံရအံ့။ အိမ်ထောင်ဖက်ကိုအကြောင်းပြု၍ ငွေကြေးစီးပွားဥစ္စာများ တိုးပွားလတ္တံ့။ အိမ်ထောင်ဖက်ထံမှ အကူအညီကောင်း အကြံကောင်းဥာဏ်ကောင်းများရလတ္တံ့။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်မှု မျှဝေခံစားမှုများဖြင့် သာယာနေအံ့။ မယ်တစ်ထမ်း မောင်တစ်ရွက်ဖြင့် ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီနေအံ့။အိမ်ထောင်ရေးသုခ ခံစားရအံ့။ စိတ်လှုပ်ရှား ရင်ခုန် ကြည်နူးမှုများ ရေထွေးနေလတ္တံ့ …. ။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးတွင် စနေသားသမီးများ ၊ နာမည်တွင် တ ထ ဒ ဓ န ပါသောသူများ ၊ လူမျိုးခြား ဘာသာခြား ၊ မီးလျှပ်စစ် ၊ အထည်အလိပ် ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့်ပက်သက်သူများ ၀င်ရှုပ်တတ်သည် …. ။
အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေး အထူးယတြာ – မလိုပါ ။ လုပ်ချင်သပဆိုလျှင် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို ရေမွှေးလက်ဆောင်ပေးရင်း ဆုတောင်းပါ …. ။
ပညာရေး – ပညာရေးကံတအားကောင်းနေအံ့။ထူးထူးချွန်ချွန် အောင်မြင်အံ့။ နည်းနည်ူးကြိုးစားလိုက်ယုံနှင့် များများအောင်မြင်လတ္တံ့။ ဆရာကောင်း သမားကောင်းတွေ့ရအံ့ …. ။
ပညာရေးကံကောင်းစေရန် – မနက်စောစော ကိတ်မုန့်(၂)ချပ်၊ ပန်းအ၀ါ(၅)ပွင့်၊ သောက်တော်ရေ(၅)ခွက်၊ ဖယောင်းတိုင်(၅)တိုင် ဘုရားလှူပြီး မိမိဖြစ်ချင်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား သဲသဲကွဲကွဲ အသံထွက်ဆုတောင်းပါ။ ချိုးမယ့်ရေထဲမှာ ပန်းအ၀ါ(၅)ပွင့်ထည့်ပြီးရေးချိုးရင်းလည်းဆုတောင်းပါ။
ကျန်းမာရေးညံ့လျှင်ပြုလုပ်ရမည့်ယတြာ – ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည …။ ရေသန့်ဗူးအခွံထဲတွင် မိမိ၏ ခြေသည်း ၊ လက်သည်း ၊ ဆံပင် အနည်းငယ်ထည့်ပါ …။ အကျီအစုတ် ၊ လုံချည်အစုတ်ထည့်ပါ …။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ထည့်ပါ …။ အိပ်ယာဘေးမှာ တစ်ညထားအိပ်ပါ …။နောက်မေ့မနက် စီးနေသောရေထဲသို့သွားမျှောလိုက်ပါ …။ မကောင်းတဲ့အခိုကအညံ့တွေ ရောဂါတွေပါသွားပါစေလို့ဆုတောင်းပါ …။
ယတြာ။ ။မည့်သည့်နေ့တွင်မဆို မနက်(၁၀)နာရီ (၁၀)မိနစ် (သို့မဟုတ် ) မနက်(၅)နာရီ (၂၀)မိနစ်တိတိတွင် ကော်ဖီ (၂)ခွက် ၊ အုန်းသီးပါသောမုန့် (၆)ခု ၊ ပန်းအ၀ါ (၅)ပွင့် ၊ သောက်တော်ရေ (၁)ခွက် ၊ ဖယောင်းတိုင် (၁) တိုင် ၊ ကို မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် လှူဒါန်းဆုတောင်းခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာလုံး အခိုက်အညံ့များ ကင်းစင်ကြေပျောက်ပြီး အကြံအစည်များအောင်မြင်လတ္တံ့။(အကြောင်းရှိတိုင်း မကြာခဏပြုလုပ်နိုင်သည်)
(၂၀၁၉) ခုနှဈ ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြားအတှကျ (၁) နှဈစာ ဟောစာတမျး
ဘဝတဈဆဈခြိုးပွောငျးလဲမွငျ့တကျလတ်တံ့ …. ။
အတိတျကံကိုအကွောငျးပွုပွီးငှအေစုလိုကျအပုံလိုကျရခွငျး၊ထီဆုကွီးပေါကျခွငျး၊ခွံ၊ကား၊ကြောကျ ကောငျးသောဝငျခွငျးတှငျရှိလတ်တံ့။ အခဈြရေးမတ်ေတာရေးကံကောငျးခွငျး၊မကျြနှာပှငျ့ စနျးပှငျ့ခွငျး၊ငှကွေေးဥစ်စာပစ်စညျးမြား စုဆောငျးတိုးပှားခွငျးတို့ကွုံရလတ်တံ့။ စိတျကူးဉာဏျပျေါသလောကျ လကျတှအေ့ကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျပါ။အခြိနျမဖွုနျးသငျ့။ရညျရှယျခကျြရှိသမြှ ရဲရဲလုပျပါ။ ဘာပဲလုပျလုပျ အတိုကျအခံ အခကျအခဲ စိတျပူစရာ စိတျလှုပျရှားစရာမြားကွုံတှပွေီ့းမှ အောငျမွငျလတ်တံ့။ မိမိမသိခဲ့သော အတိတျကံ အကောငျးအဆိုး နှဈမြိုးစလုံး၏ အကြိုးကို တှကွေုံ့ခံစားရလတ်တံ့ …. ။
ငှရေေးကွေးရေး – အတိတျကံကို အကွောငျးပွု၍ ငှကွေေးအစုလိုကျအပုံလိုကျရအံ့။ ငှကွေေးကံ အထူးကောငျးနအေံ့။ ငှကွေေးကိစ်စမြား မိမိရညျမှနျးထားတာထကျ ပိုမိုအောငျမွငျအံ့။ မိမိရညျမှနျးထားတာထကျ ပိုမိုစုဆောငျးရအံ့။ တိုးပှားအံ့။ မလိုအပျသညျ့နရောမြားတှငျ ငှကွေေးဖွုနျးတီးမိတတျတာကိုတော့ သိထားသငျ့။ ငှကွေေးကိစ်စမြား ရဲရဲတငျးတငျး ဆောငျရှကျသငျ့သညျ …. ။
ထီထိုးကံစမျးရနျ – ကွကျသားကွျောဘုရားလှူပါ ၊ သူငယျခငျြးမိတျဆှမြေားကို ဒါနလုပျပါ ။ ပွီးလြှငျ ( သ ဟ က ခ ဂ ဃ င ) ပါသောထီဆိုငျတှငျ (၂) နှငျ့ (၆) မြားမြားပါသော ထီလကျမှတျကိုရှေးထိုးပါ။ ပါးစပျမှနေ တာဗားနိုး ( TAVANO) ရှတျပွီးထိုးပါ …။
အခဈြရေး – အပြိုလူပြိုမြား အတိတျဘဝက ဆုတောငျးရှိခဲ့ဖူးသော အခဈြဟောငျး အဆကျဟောငျးမြားနှငျ့ ပွနျလညျဆုံတှရေ့လတ်တံ့။ ခဈြသူထံမှ အမှတျတရလကျဆောငျတဈခု ကွီးကွီးမားမားရအံ့။ မိမိကိုစိတျဝငျစား ခဈြကွိုကျနသေူမြား အမြားအပွားပျေါလာလတ်တံ့။ ၀ိုငျးဝိုငျးလညျနအေံ့။ အလှနျအမငျး စိတျလှုပျရှား ရငျခုနျနရေအံ့။ စိတျကောကျလိုကျ ပွနျတညျ့လိုကျဖွငျ့ ကွညျနူးစရာမြား အတိပွီးနအေံ့ …. ။
အိမျထောငျရေး – မိမိအိမျထောငျဖကျ၏ သဝနျတိုခွငျးကို ခံရအံ့။ အိမျထောငျဖကျကိုအကွောငျးပွု၍ ငှကွေေးစီးပှားဥစ်စာမြား တိုးပှားလတ်တံ့။ အိမျထောငျဖကျထံမှ အကူအညီကောငျး အကွံကောငျးဉာဏျကောငျးမြားရလတ်တံ့။ တဈဦးနဲ့တဈဦး နားလညျမှု မြှဝခေံစားမှုမြားဖွငျ့ သာယာနအေံ့။ မယျတဈထမျး မောငျတဈရှကျဖွငျ့ ရှသှေ့ားနောကျလိုကျညီနအေံ့။အိမျထောငျရေးသုခ ခံစားရအံ့။ စိတျလှုပျရှား ရငျခုနျ ကွညျနူးမှုမြား ရထှေေးနလေတ်တံ့ …. ။
အခဈြရေးအိမျထောငျရေးတှငျ စနသေားသမီးမြား ၊ နာမညျတှငျ တ ထ ဒ ဓ န ပါသောသူမြား ၊ လူမြိုးခွား ဘာသာခွား ၊ မီးလြှပျစဈ ၊ အထညျအလိပျ ၊ နိုငျငံရပျခွားနှငျ့ပကျသကျသူမြား ဝငျရှုပျတတျသညျ …. ။
အခဈြရေးအိမျထောငျရေး အထူးယတွာ – မလိုပါ ။ လုပျခငျြသပဆိုလြှငျ သူငယျခငျြးမိတျဆှတေဈယောကျကို ရမှေေးလကျဆောငျပေးရငျး ဆုတောငျးပါ …. ။
ပညာရေး – ပညာရေးကံတအားကောငျးနအေံ့။ထူးထူးခြှနျခြှနျ အောငျမွငျအံ့။ နညျးနညျူးကွိုးစားလိုကျယုံနှငျ့ မြားမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။ ဆရာကောငျး သမားကောငျးတှရေ့အံ့ …. ။
ပညာရေးကံကောငျးစရေနျ – မနကျစောစော ကိတျမုနျ့(၂)ခပျြ၊ ပနျးအဝါ(၅)ပှငျ့၊ သောကျတျောရေ(၅)ခှကျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၅)တိုငျ ဘုရားလှူပွီး မိမိဖွဈခငျြတာကို ပွတျပွတျသားသား သဲသဲကှဲကှဲ အသံထှကျဆုတောငျးပါ။ ခြိုးမယျ့ရထေဲမှာ ပနျးအဝါ(၅)ပှငျ့ထညျ့ပွီးရေးခြိုးရငျးလညျးဆုတောငျးပါ။
ကနျြးမာရေးညံ့လြှငျပွုလုပျရမညျ့ယတွာ – ဗုဒ်ဓဟူးနညေ့ …။ ရသေနျ့ဗူးအခှံထဲတှငျ မိမိ၏ ခွသေညျး ၊ လကျသညျး ၊ ဆံပငျ အနညျးငယျထညျ့ပါ …။ အကြီအစုတျ ၊ လုံခညျြအစုတျထညျ့ပါ …။ ဆနျလကျတဈဆုပျထညျ့ပါ …။ အိပျယာဘေးမှာ တဈညထားအိပျပါ …။နောကျမမေ့နကျ စီးနသေောရထေဲသို့သှားမြှောလိုကျပါ …။ မကောငျးတဲ့အချိုကအညံ့တှေ ရောဂါတှပေါသှားပါစလေို့ဆုတောငျးပါ …။
ယတွာ။ ။မညျ့သညျ့နတှေ့ငျမဆို မနကျ(၁၀)နာရီ (၁၀)မိနဈ (သို့မဟုတျ ) မနကျ(၅)နာရီ (၂၀)မိနဈတိတိတှငျ ကျောဖီ (၂)ခှကျ ၊ အုနျးသီးပါသောမုနျ့ (၆)ခု ၊ ပနျးအဝါ (၅)ပှငျ့ ၊ သောကျတျောရေ (၁)ခှကျ ၊ ဖယောငျးတိုငျ (၁) တိုငျ ၊ ကို မိမိနအေိမျဘုရားတှငျ လှူဒါနျးဆုတောငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈတာလုံး အခိုကျအညံ့မြား ကငျးစငျကွပြေောကျပွီး အကွံအစညျမြားအောငျမွငျလတ်တံ့။(အကွောငျးရှိတိုငျး မကွာခဏပွုလုပျနိုငျသညျ)
“အဖေနဲ့အမေ မရှိပေမဲ့ မောင်လေးရှိတယ် အားမငယ်နဲ့ နေပြန်ကောင်းလာမှာပါ” ဆိုတဲ့ ၇ နှစ်အရွယ် ကောင်လေး….